Bhuku raZvakazarurwa 3:1-22
Mashoko kuungano yeSadhisi (1-6), yeFiradhefiya (7-13), yeRaodhikiya (14-22)
3 “Nyorera ngirozi yeungano iri muSadhisi kuti: Izvi ndizvo zvinotaurwa naiye ane mweya minomwe yaMwari+ nenyeredzi nomwe:+ ‘Ndinoziva mabasa ako, kuti unonzi* uri mupenyu asi iwe wakafa.+ 2 Muka,+ usimbise zvinhu zvasara zvakanga zvava kuda kufa, nekuti ndakaona kuti hausi kunyatsoita mabasa ako* pamberi paMwari wangu. 3 Saka ramba uchifunga* zvawakagamuchira nezvawakanzwa, woramba wakazvibatisisa, uye pfidza zvivi zvako.+ Chokwadi kana ukasamuka, ndichauya sembavha,+ uye hauzombozivi nguva yandichauya kwauri.+ 4 “‘Kunyange zvakadaro, une vanhu vashoma* muSadhisi vasina kusvibisa nguo dzavo.+ Vanhu ivavo vachafamba neni vakapfeka nguo chena,+ nekuti vakakodzera kuti vadaro. 5 Uya anokunda+ achabva apfeka nguo chena,+ uye handizombodzimi zita rake mubhuku reupenyu,+ asi ndichabvuma kuti ndinoziva zita rake pamberi paBaba vangu nepamberi pengirozi dzavo.+ 6 Ane nzeve ngaanzwe zvinotaurwa nemweya kuungano.’ 7 “Nyorera ngirozi yeungano iri muFiradhefiya kuti: Izvi ndizvo zvinotaurwa naiye mutsvene,+ wechokwadi,+ ane kiyi yaDhavhidhi,+ anovhura zvekuti hapana anozovhara uye anovhara zvekuti hapana anovhura: 8 ‘Ndinoziva mabasa ako. Hona, ndavhura suo pamberi pako+ risina anogona kuvhara. Ndinoziva kuti hauna simba rakawanda, wakachengeta shoko rangu uye hauna kuramba zita rangu. 9 Inzwa! Ndichaita kuti vaya vesinagogi raSatani avo vanonyepa vachizviti vaJudha ivo vasiri,+ vauye. Ndichaita kuti vauye vopfugama pamberi pako,* ndoita kuti vazive kuti ndakakuda. 10 Wakachengeta shoko rekutsungirira kwangu,*+ saka ndichakuchengetawo panguva yekuedzwa+ ichauya panyika yese kuzoedza vanhu vanogara panyika. 11 Ndiri kukurumidza kuuya.+ Ramba wakabatisisa zvauinazvo, kuti pasava neanotora korona yako.+ 12 “‘Anenge akunda ndichamuita mbiru mutemberi yaMwari wangu, uye haazombobudi mairi; ndichanyora paari zita raMwari wangu+ nezita reguta raMwari wangu, iro Jerusarema Idzva+ rinoburuka kubva kudenga kuna Mwari wangu, uye ndichanyorawo zita rangu idzva paari.+ 13 Ane nzeve ngaanzwe zvinotaurwa nemweya kuungano.’ 14 “Nyorera ngirozi yeungano iri muRaodhikiya+ kuti: Izvi ndizvo zvinotaurwa naAmeni,+ chapupu+ chakatendeka uye chechokwadi,+ wekutanga pane zvakasikwa naMwari:+ 15 ‘Ndinoziva mabasa ako, kuti hautonhori kana kupisa. Dai zvako waitonhora kana kupisa. 16 Sezvo uchidziya, usingapisi+ kana kutonhora,+ ndichakusvipa. 17 Nemhaka yekuti unoti, “Ndakapfuma+ uye ndine upfumi, hapana chandinoshaya,” asi usingazivi kuti unosiririsa, unonzwisa tsitsi, uri murombo, uri bofu uye hauna kupfeka, 18 ndinokupa zano rekuti utenge kwandiri goridhe rakanatswa nemoto kuti upfume, uye utengewo nguo chena dzekuti upfeke kuti usaonekwa usina kupfeka,+ wotengawo mafuta emaziso kuti uzore maziso+ ako uone.+ 19 “‘Vese vandinoda ndinovatsiura uye ndinovaranga.+ Saka pfidza zvivi zvako ushumire uchishingaira.+ 20 Inzwa! Ndakamira pasuo uye ndiri kugogodza. Kana munhu akanzwa inzwi rangu ovhura suo, ndichapinda mumba make ndodya zvekudya zvemanheru naye, tiri pamwe chete. 21 Ndichaita kuti anokunda+ agare neni pachigaro changu cheumambo,+ sezvandakaita pandakakunda ndikagara+ naBaba vangu pachigaro chavo cheumambo. 22 Ane nzeve ngaanzwe zvinotaurwa nemweya kuungano.’”
^ Kana kuti “une mukurumbira wekuti.”
^ Kana kuti “kuita mabasa ako zvizere.”
^ Kana kuti “Saka yeuka.”
^ ChiGir., “une mazita mashoma.”
^ Kana kuti “petsoka dzako.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Wakatevedzera kutsungirira kwangu.”